( ဇာတ်လမ်း ) ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ဇာတ်လမ်း ) ၂	31
( ဇာတ်လမ်း ) ၂
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 17, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 31 comments
( ဟော ဦး ၊ ဘယ်လိုလုပ် ဒီကိုရောက်နေတာလဲ ? )
ဟုတ်ပ ၊ ကျနော်က ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်မှာ ၊ သူ့ကို မတွေ့တာကြာလို့ အိမ်ကစောစောထွက် ၊
ဒီမှတ်တိုင်နားက လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေလာစောင့်နေတာ ၊ သူ ကားလမ်းကူးလာတာမြင်မှ ထလာတာလေ ၊
( သြော် ဟုတ်တယ်နွယ် ၊ ဟို မြကန်သာလမ်းထဲက အသိအိမ်မှာ အလှုလုပ်လို့ )
( သြော် မသိပါဘူး ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ လာစောင့်နေသလားလို့ )
သေစမ်း ၊ ငါ့ဗျူဟာက အတော်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီထင်တယ် ၊
သူက ပြုံးစိစိနဲ့ ကျမသိပါတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံ ၊ ဒီလိုနဲ့ ကားစီးလာ လှိုင်မင်းမှာထိုင်ပေါ့ ၊
( နွယ်နဲ့ မဆုံတာ ကြာပြီနော် ၊ ဘယ်သွားနေတာလဲ ? )
( ရှိပါတယ် ဦးရယ် နေ့တိုင်းလာနေတာပဲ )
( ဟင် အဲဒါဆို ဘာလို့ မတွေ့မိရတာတုန်း )
( သြော် ဦးရယ် ချိန်းထားတာမှ မဟုတ်တာ ၊ လွဲနိူင်တာပေါ့ )
( ဦးက ဘာများဖြစ်သလဲလို့စိတ်ပူနေတာ )
( နွယ်ကလည်း ဦးကို မတွေ့လို့ ခရီးတွေဘာတွေ သွားနေတယ်ထင်တာ )
အဲ မဆိုးဘူးဗျ ၊ သတိရတယ်ဆိုပဲ
( အဖေကြီး မုန့်ဘိုး )
ဟဲ့ သောက်ခွေး ၊ အမယ်လေး ဒီမယ် ဖီလင်ဝင်နေတုန်းဟ ငါ့သားရ ၊
ဒီလိုဗျ ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့သားက ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တို့ ပေါင်းဖွင့်တဲ့ ဘောလုံးသင်တန်းတက်နေတာ ၊
လှိုင်မင်းက ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အဝင်လမ်းမှာ ၊
အေးပါကွာဆိုပြီး ငါးရာတန်ထုတ်တော့ အဖေကြီး သားး သွားစရာရှိတယ် ၊ အဖွားကြီးဆဆီက မတောင်းခဲ့ရလို့ ၊ သုံးထောင်ပေး တဲ့
၊ သောက်ဘဲ လူလည်ကျတာ ၊ ဒီလိုအနေအထားက သူ့အတွက် အကွက်လေ ၊ ပိုက်ဆံမြန်မြန်ပေးပြီး သူ့ကို ရှင်းထုတ်ရမှာလေ ၊
အမယ် သူက မြန်မြန်သာပေးလိုက်စမ်းပါ အဖေကြီးရယ်ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ဗျ ၊ ပေးလိုက်ရတော့တာပေါ့ဗျာ ၊
အဖေကြီး ဟိုနောက်စားပွဲမှာ သား ကိုလာ သာက်ထားသေးတယ် အဲဒါလည်း ရှင်းလိုက်နော် တဲ့
ဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေလည်း မသိတော့ပါဘူး၊
( ဦး သားက လူချောပဲ ၊ အဖေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး )
( ဒီမှာနွယ် ၊ ဒီအဖေကြောင့် ဒီသားဖြစ်လာတာဗျ )
( ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အမေနဲ့များ တူသလားလို့ )
( ဒီမိန်းမအကြောင်း လာမပြောနဲ့နော် ၊ လှချင်လှ မလှချင်နေ ဦးခေါင်းထဲမှာ မရှိဘူး )
( ဦးရယ် ဆောရီးပါ ၊ ဒေါသမကြီးပါနဲ့ ၊ နွယ်က စကားအဖြစ်ပြောတာပါ )
( လာမပြောနဲ့ ၊ အဲသလို လာပြောသူတိုင်းဟာ မုန်းသူပဲ )
( အမယ်လေး ၊ နွယ့်ကိုတော့ မမုန်းလိုက်ပါနဲ့နော် ၊ မုန်းသူလည်း မဖြစ်ချင်ပါဘူး )
( ဒါဖြင့် ချစ်သူပေါ့ )
( ရှင် . . . . . )
ထိုနေ့မနက်က ရန်ကုန်တွင် နှင်းတို့ဝေခဲ့ပါသည် ၊
ညဘက်တွင်လည်း လေနူအေးလေးများ တိုက်ခတ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည် ၊
စားနေကျ ထမင်းဆိုင်တွင် ထမင်းလိုက်ပွဲမှာစားမိ၍ ဆိုင်ရှင်က ထူးထူးဆန်းဆန်း လိုက်ပွဲတွေ ဘာတွေ မှာလို့ပါလားဟု
အပြောခံရပါသည် ၊ ကျနော်က ပုံမှန် ထမင်းတစ်ပန်းကန်သာ စားခဲ့သူဖြစ်ပါသည် ၊
သို့သော် နောက်နောင်တွင် လိုက်ပွဲများ မှာစားလေ့ရှိသူ ဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်နေမိလျက် . . . . . . .
Kaung Kin Pyar says: အဲ့…အူးမျိုး….
တိုက်စစ် စ နေပြီပေါ့….။ သားနဲ့ တိုးသွားတော့လဲ တစ်မျိုးကောင်းတာပါပဲ…။
ဟိုဘက်ကလဲ အတော်လေးကို ရိပ်မိနေပုံရှိတယ်….
နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းကို စောင့်နေပါတယ်…..
တောင်ပေါ်သား says: အင်းးးးး လမ်းတော့မှန်သလိုရှိနေပေမယ့် ညှိစရာတွေက အများသား
တောင်ပေါ်သား says: ဒုန်းဒုန်းဒုန်း ကနေ ဒိုင်းကနဲ အပစ်မခံရဖို့ သတိထားရဦးမယ်
Mr. MarGa says: “အင်”
တောင်ပေါ်သား says: YES SIR Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: ..လက်ကိုင်ပါဆိုဗျာ ..
တောင်ပေါ်သား says: ဟဲ့ နုထွားရဲ့
ဒါနဲ့ သူ့အသားက အတော်အေးသဟ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: သွက်​ထာ​နော်​
ဒါနဲ့ဦးမျိုး အိမ်​ကအိမ်​ကသား​တော်​​မောင်​လည်း အဲ့လိုပဲ လူ​ရှေ့သူ​ရှေ့ဆို လိုချင်​တာ​တွေ​တောင်းဆိုတာ ဘယ်​​လောက်​ဆူထားထား အခွင့်​အ​ရေးအပြည့်​အ၀အသုံးချတာ။သန့်​​ကောင်းစံတို့ကပိုဂွင်​တည့်​တာ​ပေါ့
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ပ သော်သော်ရေ
naywoon ni says: ဟာဂျာ ​တော်​​တော်​ဆိုးတဲ့သူပဲ ။ ကိုရီးယား ဇာတ်​လမ်းတွဲလား​အောက်​​မေ့ရ ။ စိတ်​၀င်းစားစရာ ဖြစ်​ရင်​ ရပ်​လိုက်​ဘီ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အပိုင်း ၃ လာမှာပေါ့ ဆရာနီရယ်
black chaw says: ဆရာမျိုးရေ…။
ပန်းဖြစ်လျှင်လည်း အကောင်းသား နော်…။
တောင်ပေါ်သား says: ပန်းဆို ဘယ်လိုလုပ် လက်ကလေးကိုင်လို့ ရပါ့မလည်းဂျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ♫ ♪ ဂီတာအိုတောင် ပျိုရွယ်နေဆဲ… တေးသံနဲ့.. သီချင်းအသစ်ဖြစ်သေးရင်…
အကြင်နာဆိုတာ … ဒီတစ်ယောက်နဲ့ပဲ … ပြီးသင့်သလား… ♫ ♪
ဆွဲထား ကိုဂျီးမြိုး … လက်ဖွဲ့ဖို့ ပြင်ထားတယ်… ခွိ ခွိ
တောင်ပေါ်သား says: ဆရာကျောက်စ်ရယ်
အခုမှ စလုံးရေစ တာဗျ
Alinsett@Maung Thura says: ကိုရီးယား အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလိုရေးဗျာာာ
တောင်ပေါ်သား says: အိုပါးကလည်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ခိုးပြေးဗျာ.. ကားတင်ဗျာ.. ကြာဒယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ခိုးပြေးစရာ မလိုအောင် ကြံစည်နေပါကြောင်း
sorrow says: ဟာဗျာ..ဒါလေးမေးတာကို ..ကတ်ကတ်လန်ရသလားဗျာ… သူပြောတာလေး ပြုံးပြီးနားထောင်ရမှာ ..ဘယ့်နှယ့်ဗျာ …လက်ဖမ်းကိုင်ပစ်ပါဆို …ရန်သွားလုပ်ရတယ်လို့ … နောက်တစ်ခါ မြင်တာနဲ့ ..လက်ဖမ်းကိုင်ပစ်… ဒီအခြေအနေရောက်နေတာကိုဗျာ…လက်နှေးပါ့ ….
တောင်ပေါ်သား says: နီက အဝေးကနေ မြှောက်နေ
နာက ရမ်းမလုပ်ရဲဘူးဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
သားလေး နဲ့ တိုး လိုက်တာ သူက အိမ်မှာ ပြန် မဖွ ဘူးလား။
သမီးလေး တွေ ရော သိသွားပြီလား။
သူတို့ က သဘောတူလား။
ကျွန်မ သာ သမီးလေး တွေ နေရာ ဆို အဖေ့ ကို ဘယ်သူ့ ကို မှ မပေးဘူး။
ဇာတ်လမ်း ကို ဖျက်တာ မဟုတ်၊ ဆက်ပါလေ။
ဟို မင်းသား မောင်စော ကြားရင် ဒွပေါ နေဦးမယ်။
ဒင်းက ပါး နမ်းခံရအောင် အဆင်းဘီး အတင်းကိုတွန်း နေတာကော။ lol:-))))
သားက လူလည်ဗျ ၊
အဖွားကြီးနဲ့ မမကြီးတို့ကို ပြောလိုက်ရမလားး တဲ့ ၊
မပြောစေချင်ရင် တစ်ရက် တစ်ထောင်ပေးတဲ့ ၊ အဖေကြီးတို့ ရုံးက မိန်းကလေးလည်း မဟုတ်ဘူး တဲ့
( ယူနီဖောင်း မတူလို့လေ )
မင်းဟာမင်း ပြောချင်ပြော မပြောချင်နေ တစ်ထောင်တော့ တတ်နိူင်ဘူးဆိုတော့
နောက်ဆုံး ငါးရာနဲ့ ဈေးတည့်သွားတယ် ၊ ဒီကောင် လူလည် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: သားသမီးတွေ…သဘောတူသည်ဖြစ်စေ သဘောမတူသည်ဖြစ်စေ …မြစ်ဆိုတာအထက်ကိုစီးရိုးမရှိသည့်အတိုင်း…
သားသမီးများဆန္ဒကို တစိမှ အဖက်လုပ်ရန်အကြောင်းမရှိ….လူတိုင်းကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်…အဟိဟိ
နောက်တစ်ခုက အကြင်နာတွေ ပန်းခင်းကြီးအဖြစ်ဖူးပွင့်ဖို့ …အစတော့ အနာခံထွန်ယက်ရသဗျ…. အစ်ကို သိသလား …
အရီးလေးစကားနားထောင်မပြောဘူးနော်… ကွကိုယ် forever alone ဖြစ်ချင်လဲ ..ကျော်မသိဘူး ..အဟိဟိဟိ ..တကယ်က အချစ်မရှိပဲနေရတဲ့ ဘ၀က .. သစ်ခြောက်ပင်ကြီးလိုပဲ..ငရဲဗျ …မစိမ်းလန်းဘူး……ကျော်များကြီးအကြံပေးပြီးပြီ…အဟိဟိ
who , Brave are loved ပဲ ..
ငါက ၂၀၁၅ မော်ဒယ် မာစီးဒီး ဟုတ်ဘူးလေကွယ်
ထော်လာဂျီသာသာ အင်ဂျင်ဆိုတော့ သိပ်မလောနဲ့ ဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .တကယ်ဂျီးလားအူးမျိုး…တယ်စွံပါလား…ဆက်ဆွဲပေတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အားပေးတဲ့သူတွေက ဒီလောက်အားပေးနေမှာတော့
အို . . . . . ဘာတဲ့တုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2278
Ma Ei says: အမေ၊ သမီး၊ သား မိသားစုနဲ့ အေးအေးမနေချင်ဘူးထင်ပ ကိုမျိုးသန့်ရေ…
အမ တော့ အားမပေးဘူးနော်… နောက်မှ အမအိ ပြောတာမှန်ပါလားဖြစ်နေဦးမယ်…
တောင်ပေါ်သား says: အမအိရေ
ကျနော် ဘယ်လို စခန်းသွားမယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပေးပါနော့
sorrow says: အစ်ကို .. ဇတ်လမ်းနှစ်က နေမတက်တော့ဘူးလားဗျ…. ကြိုးစားအားထုတ်မှုနည်းလေခြင်းဗျာ…